रूपेश श्रेष्ठ | गृहपृष्ठ
Home शिक्षा रूपेश श्रेष्ठ
on: July 30, 2012 शिक्षा
शैक्षिक निर्देशक, ह्वाइटहाउस स्कूल अफ होटल म्यानेजमेण्ट
होटलहरूले औपचारिक शिक्षा लिनेभन्दा अन्य श्रमिकलाई रोजगारी दिएका छन्
अहिले नेपालमा बीएचएमको आकर्षण कस्तो छ ?
ब्याचलर इन होटल म्यानेजमेण्ट (बीएचएम) पढाइ हुने कलेजको सङ्ख्या बढ्दै गए पनि विद्यार्थीमा यसप्रतिको आकर्षण घटिरहेको पाइएको छ । विशेषगरी प्लस टू तहमा होटल म्यानेजमेण्ट अध्ययन गरेर आउने विद्यार्थी सङ्ख्या घट्दो क्रममा छ । स्नातक तहमा अन्य सङ्कायबाट आउने विद्यार्थी बढी छन् । उच्चमाविहरूले पनि विद्यार्थीलाई उचित परामर्श दिन नसकेकाले पनि समस्या आएको छ । उनीहरूले होटल म्यानेजमेण्टको फरक पेशाबारे विद्यार्थीलाई अभिमुखीकरण गर्न सकेका छैनन् ।
त्यसैले, विद्यार्थीमा बीएचएम अध्ययन गरेपछि रेष्टुराँमा मात्र रोजगारी पाइन्छ, यसको अन्यत्र काम छैन भन्ने मानसिकता व्याप्त छ । यसमा भविष्य सुनिश्चित नहुने देखेर विद्यार्थीहरू विषय परिवर्तन गर्न तत्पर भइरहेका छन् । तर, यो गलत हो । नेपालमा बीएचएम अध्ययन गरेका विद्यार्थीले विश्वव्यापी रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छन् । होटल म्यानेजमेण्ट व्यावसायिक होटल र रेष्टुराँका लागि मात्र होइन । सबैजसो ठूला कम्पनीमा पनि यो विषय अध्ययन गरेका जनशक्ति खपत हुन सक्छन् । यो कुरा विद्यार्थीलाई बुझाउने हो भने पक्कै पनि बीएचएममा आकर्षण बढ्छ भन्ने मलाई विश्वास छ ।
अहिलेसम्म नेपालमा बीएचएम अध्यापन गराउने शैक्षिक संस्थामा कति लगानी भएको छ ?
नेपालमा त्रिभुवन, काठमाडौं, पूर्वाञ्चल र पोखरा विश्वविद्यालयले बीएचएम कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन् । यी विश्वविद्यालयअन्तर्गत करीब ३० ओटा र भारतीय एवम् तेस्रो मुलुकका विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त करीब ३० ओटा गरी करीब ६० कलेजले नेपालमा बीएचएमको अध्यापन सञ्चालन गरिरहेका छन् । एउटा स्तरीय कलेजमा औसत ४ करोडदेखि ५ करोड रुपैयाँ लगानी हुने गरेको छ । सबै कलेजमा गरी कम्तीमा १ अर्ब रुपैयाँ लगानी भएको छ ।
स्वदेशका ठूला होटलले नै बीएचएमका विद्यार्थीलाई महत्व दिदैनन् भनिन्छ नि ?
हो, यहाँका केही होटलले शैक्षिक जनशक्तिलाई भन्दा न्यूनतम श्रमिकका रूपमा रहेका जनशक्तिलाई प्राथमिकता दिइरहेका छन् । तर, समयानुसार उनीहरूले आफ्नो रोजगार प्रणाली परिवर्तन गर्नुपर्छ । यसका लागि केही प्रयास भएका पनि छन् । आगामी दिनमा बीएचएमका उत्पादनलाई स्वदेशी बजारमा प्रशस्त रोजगारी प्राप्त हुने सम्भावना छ । होटलहरूले कम पारिश्रमिक दिए हुने र धेरै श्रम प्राप्त गर्न सकिने भएकाले शैक्षिक जनशक्तिको तुलनामा अन्य श्रमिकलाई प्राथमिकतामा राखेका हुन् । यही समस्याका कारण हामीले आफ्ना विद्यार्थीलाई प्रयोगात्मक अध्ययनका लागि विदेशका होटलमा पठाउने गरेका छौं । हाम्रा विद्यार्थीहरू अफिसियल ट्रेनिङका लागि थाइल्याण्ड, दुबई, मलेसिया, बहराइन, कतार र भारतका विभिन्न शहरमा गइरहेका छन् । त्यहाँ उनीहरूले स्तरीय शीपका अतिरिक्त आंशिक कमाइ पनि गर्छन् । देशविदेश घुमेर नयाँनयाँ अनुभव पनि बटुल्छन् । प्रमुख कुरा त अन्तरराष्ट्रिय मान्यताप्राप्त ‘सर्टिफिकेट’ पाइने भएकाले उनीहरूको भविष्य पनि उज्ज्वल रहन्छ ।
लगानीका हिसाबले स्वदेश र विदेशमा पढ्दा के अन्तर छ ?
यसमा ठूलो अन्तर छ । नेपालमा बीएचएम गर्न ३ लाखदेखि ५ लाख रुपैयाँ लाग्छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको ३ वर्षे कोर्सका लागि ३ लाख रुपैयाँ शुल्क लाग्छ । चार सेमेष्टर कोर्स भएका अरू विश्वविद्यालयअन्तर्गत अध्ययन गर्दा ४ लाखदेखि ५ लाख रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्छ । भारतमा यही कोर्सका लागि ६ लाख रुपैयाँ शुल्क लाग्ने गरेको छ । तेस्रो मुलुकमा अध्ययन गर्नुपर्दा लागत आकाशिन्छ । स्वीट्जरल्याण्डको आईएमआई विश्वविद्यालयबाट ६ सेमेष्टरको बीएचएम कोर्स पूरा गर्न करीब १ करोड रुपैयाँ लाग्छ । तेस्रो मुलुकका अन्य विश्वविद्यालयले पनि आईएमआईकै हाराहारीमा शुल्क निर्धारण गरेका छन् ।
अहिलेको अवस्थामा बीएचएम अध्यापन गर्ने कलेजका चुनौती केके हुन् ?
यस विषयप्रति घट्दै गएको आकर्षणलाई सुधार गर्नु पहिलो आवश्यकता हो । अर्को कुरा, यहाँ पढाउने एकथरी र काम लगाउने अर्काथरी छन् । पाठ्यक्रम र व्यावसायिक अभ्यासबीचको यो दुरी कम गर्न विश्वविद्यालय र पर्यटन उद्योगहरूबीच समन्वय हुनु आवश्यक छ । बजारको मागअनुसार शीप प्राप्त हुने गरी शिक्षा प्रदान गर्ने हो भने मात्र त्यो शिक्षाको उपयोगिता रहन्छ । तेस्रो कुरा, बीएचएम पढाइको एक दशक लामो इतिहासमा कलेजहरू धेरै थपिए । तर, योग्य शिक्षकको अभाव भने खट्किँदै गएको छ । अहिले कतिपय कलेजमा बीएचएम पढिरहेका विद्यार्थीले प्लस टू तहमा अध्यापन गरिरहेका छन् । माथिल्लो तहमा पनि त्यस्तै समस्या छ । यसकारण दक्ष शिक्षकको व्यवस्था गरिनुपर्छ र राज्यले अनुगमन प्रणालीलाई पनि सक्रिय बनाउनु आवश्यक छ ।